YS-130NO / NC Standard Type Electric Strike Manufacturers and Suppliers - YLI ELECTRONICï¼ˆASIAï¼ ‰ LTD
Ulo > > Mkpọchi eletrik > YS-130NO / NC Standard Type Electric tie
Ezubere YS-130NO / NC maka ọnụ ụzọ osisi, ọnụ ụzọ ígwè, ọnụ ụzọ PVC na ihe ndị ọzọ. Ngwaahịa nke ụlọ ọrụ anyị dị iche iche ma zuru oke. Operatingkpụrụ ọrụ nke iku ọkụ eletrik bụ na ike eletrik na-agbanwe n'ime ike ndọta. Electric iku nwere abụọ na-arụ ọrụ ụdịdị: otu n'ime ndị mode na-ụzọ kpọchiri mgbe ike anya. Anotherdị ndị ọzọ na-agbachi ụzọ mgbe ike na ya.
Nlereanya:YS-130NO / NC
Ule na usoro 1000000.
lts usoro igwe anaghị agba nchara nkenke mgbatị
Voltaji DC12V (Mkpa Order DC24V)
Njirimara Fail Secure (YS-130NO); Ada Ada (YS-130NC)
Tags na-ekpo ọkụ: YS-130NO / NC Standard Type Electric Strike, Ndị na-emepụta, Ndị na-eweta, Factlọ ọrụ, Nhazi, Bulk, Ihe Nlele efu, China, emere na China, ego, zụta ego, ọnụahịa, Ndepụta ọnụahịa, Nkwupụta, OA, ISO9001, Ogo